Ny fakan-tsary miakanjoana dia tonga amin'ny karazany maro, azo atao ny mitafy ary mametraka amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana izay misy: loha, soroka ary tratra. Manjary tena ilaina tokoa ny misafidy ny karazana fakantsary vatana tsara indrindra izay mifanentana amin'ilay asa tokony hatao. Tsara ny manamarika fa ny fakantsary rehetra dia samy manana ny fantsony sy ny fianjeran'izy ireo, fotsiny ihany izy ireo no tokony ho lalao tsara indrindra amin'izay mety hatao. Miverina amin'ny andro izay nampidirina voalohany ny hery ny fakantsary dock, nisy tranga maro tamin'ny fihoaram-pefy. Tsy tadiavin'ny tompon'andraikitra fotsiny ny hoe "rahalahy lehibe" nihaona tamin'izy ireo, nijery ny fihetsiky ny olona rehetra ary naheno ny resaka rehetra. Haingam-pandeha haingana nandritra ny am-polony taona maro taty aoriana, dia nangataka ny hitondrana azy ireo amin'ny fiarany ny tompon'andraikitra. Takatr'izy ireo ny fanandramana iraisan'ny rehetra sy ny hoe matetika no notarihan'ireo manamboninahitra tamin'ny raharaha ireo raharaha. Ny fahalalana ny habetsaky ny fanampiana ireo manampahefana amin'ny fisamborana izay miafara amin'ny fandresen-dahatra, ary koa manakana ny fitarainana mahatsiravina ataon'ireo olom-pirenena izay misafotofoto fotsiny amin'ireo polisy. Rehefa nampidirina tamin'ny heriny ny fakan-tsary avy amin'ny vatana, dia nisy ny fanesorana voalohany tamin'ny zoro samihafa. Ny ankabeazan'ny antony dia mitovy amin'ny fahatsapana ny "anadahy lehibe" toy ny tamin'ny voalohany nampidirina tamin'ny herin'ny polisy ny fakantsary Dock. Saingy rehefa nandeha ny fotoana dia voaroaka haingana satria ny fikarohana dia namihina haingana ilay fandaharana, dia hitan'ny tompon'andraikitra fa teknolojia tsara iray afaka miaro azy ireo amin'ny fitarainana sandoka-izay nanjary fahita mahazatra.
Ny marina ankehitriny dia maro ireo manampahefana maniry ny fakan-tsary amin'ny vatana araka izay azo atao. Noho izany dia nanjary zava-dehibe ny fananana endri-javatra sasany mba hisaintsaina rehefa misafidy fakantsary vatana, na manao fikambanana toy ny orinasa na olon-tsotra ianao. Ireto misy zavatra roa hojerena mandritra ny misafidy:
Hevitra: na inona na inona fomba fijerinao fakantsary fakana sary na sary iray dia tena zava-dehibe, ny fomba fijerinao izay fakantsary ampiasana fakana sary no azo raisina ho singa manan-danja indrindra izay vahaolana manan-danja ho an'ny masoivoho mpampihatra lalàna. . Na iza na iza mampiasa fakantsary dia tokony hahatsapa tena tsara amin'ny sehatry ny fijerena ny fandraisam-peo, dia manampy io fandraketana io hahafantatra raha toa ka manampy ny fametrahana fakantsary na tsy manampy ilay rakitsary. Zava-dehibe ny manamarika fa ny fananana ny fakan-tsary eo amin'ny tratrany, dia mety midika fa rehefa tafiditra amin'ny endrika fihantsiana ny tompon'andraikitra izay mitaky ady, dia mety ho voatsipy midina midina avy eo ny fakantsary izay midika fa ny sombin-dohan'ity lohahevitra ihany ity. Ny faritra tsara indrindra amin'ny fametrahana ny fakan-tsary dia any amin'ny faritra iray mitovy amin'ny andalana hitan'ny mpampiasa. Ny faritra sasany izay azo dinihina dia:
ny mololo amin'ny satroka baolina
volon-tsofina fihaviana amin'ny solomaso
epaulet ny fanamiana
Ireo faritra rehetra ireo dia manao asa lehibe amin'ny fanaovana ny fitandremana ny tsipika fahitana. Tena ilaina tokoa izany ary maro ny fahalalana tsy maintsy apetraka amin'ity.
Fahamarinana sy fahatokisana: mila manontany tena amin'ny tenanao ianao hoe "hatraiza tokoa ity marika teknolojia ampiasaintsika ity?" Ny faharetana dia mitana andraikitra lehibe indrindra indrindra amin'ny famaritana ny halavan'ny cam. Tsy maintsy misy fifandanjana eo amin'ny safidinao mapiala, satria mety ho tonga mavesatra ny indraindray. Ny fahazoana cam mavesatra dia ho olana be, satria mavesatra dia afaka manao fakantsary tsy ampiasaina satria mamoaka hevitra diso ilay mpanao azy sy ilay mpandray hevitra. Betsaka ny ohatra mampiseho fiasana matevina izay navela ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny satria fotsiny ny lanjan'izy ireo dia tsy hita soritra sy mihamafy. Ny fifandanjana dia matetika fanalahidy, tadidio foana ny fomba fampiasana sy ny fomba mahasalama anaovana izany. Raha mikenjika ianao, fakantsary be mavesatra be dia tsy hahasoa satria mampiadana anao izany ary hahatonga anao ho reraka haingana. Zava-dehibe ny ahafahanao miantehitra tsara amin'ny fakan-tsary mba tsy ny fandraisam-peo fotsiny izay hitanao fa tsy hanelingelina na hampivadika azy, tsy maintsy mihetsika izany na dia tsy eo aza ny misy azy.
Fampiononana sy habe: Ny haben'ny fakantsary dia zava-dehibe tokoa rehefa misafidy fakantsary, ny fananana ny kely dia mety hanararaotra nefa lehibe tokoa. Araka ny fantatsika rehefa mikasika ny fampiononana sy ny haben'ny fitaovana, ny maivana dia tsara kokoa. Zava-dehibe ny hiezahanao mandanjalanja ny haben'ny lanja, ny haben'ny fonosana ary ny halavany. Ny fonosana dia midika fa ny fakantsary fitambaran-dasitra rehetra dia tokony hiaraka hiasa mba hiasa azy. Ity no fitambaran'ny fonosana iray manontolo izay mety tafiditra ao anaty tariby roa, setran'ny bateria ary angamba mpamaha / raharaha. Zava-dehibe ny mitandrina anao amin'ny fisafidianana mifototra amin'ny lanjany, izany dia ny fisorohana fitaovana iray izay mora vaky mora.
Fampiasana tsotra: ara-boajanahary ny rehetra fa mila fitaovana mora atodika sy hanodina ihany koa, midika hoe tsy misy teknisiana teknolojia tena ankasitrahana. Tena ho sarotra tokoa rehefa mila mikasa ny dingana roa ny lehilahy zokiolona mba hampandehanana na hiato ny fisolanana. Ankoatra ny fampiasana mora, dia ilaina ny afaka mampiasa koa rehefa miverina amin'ny patrol ny manamboninahitra iray. Ny tompon'andraikitra dia andrasana handany fotoana kely ao amin'ny birao sy fotoana bebe kokoa eny an-dalana, ny fananana teknolojia izay tsy sarotra be loatra dia mety hahatonga azy ireo hanao ny mifanohitra amin'ny takiana. Amin'izany dia tsy maintsy marihina fa ny fandaniam-potoana bebe kokoa ary sarotra ny dingana dia ny fampidinana ireo horonan-tsary, asiany marika, fitantanana ary fitahirizana azy ireo any amin'ny toerana ivon-toerana, izany dia midika izany fa tsy hanana fotoana kely ho an'ny zavatra hafa rehetra izy ireo.
Ny fitantanana data-miverina: Ity fehezanteny manokana ity dia miompana amin'ny olana toy ny hoe mora sy azo tantanana ny fakan-tsary sy ny asany dia ny fampidinana, ny fivarotana, ny fizarana ary ny fahazoana angon-drakitra marobe ihany koa. Izany dia rehefa voatahiry mandritra ny fotoana maharitra ny angon-drakitra, saingy tena manan-danja tokoa izany. Tsy zava-dehibe ho an'ny manampahefana ihany izany fa ho an'ireo ao amin'ny rafi-pitsaràn'ny heloka bevava ihany ary rehefa tena zava-dehibe tokoa dia azon'izy ireo tsotra izao ny fahazoana ny hevitry ny zavatra iray manontolo. Zava-dehibe fa amin'ny fotoana rehetra no angatahana ny porofo amin'ny alàlan'ny horonantsary dia azo io ary tsy vitan'ny manamboninahitra fotsiny izany fa mihazakazaka manodidina ny tanàna hanaterana sy hanova ary hitahiry. Tokony hisy departemanta tompon'andraikitra amin'ny fanodikodinana data.
Pricing: ny vidin'ny teknolojia rehetra amidy dia tsy maintsy arovana ny tetibola, tena zava-dehibe fa tsy lafo loatra io fitaovana io. Ny vidiny dia mety ho saro-pady kokoa noho ny tena namboarina satria ny filàna fampivoarana ho avy, ny fanoloana ampahany tsy voararan'ny warranty na ny vidin'ny fikojakojana aza dia afaka miakatra hatrany. Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ho an'ny fitaovana sasany izay tsy manarona safidy fitahirizana, vola bebe kokoa no hividiana amin'ny fividianana ny tahiry ary na ny mpizara aza ho an'ny fitahirizana rahona. Mety mila miasa ihany koa ny mpiasa iray izay ny andraikiny irery dia ny fitantanana ireo angon-drakitra. Ireo dia faritra izay nitombo ny teti-bola sy ny vidiny.
Safidy maro be: ny manamboninahitra ao amin'ny patroli dia mila safidy maro azo alaina indrindra amin'ny fiakarana, tokony hisy ny safidy izay mety ho anao; mety ho: solomaso, soroka, vatana, satroka na vozon-jaza. Ny fahaiza-mandanjalanja amin'ny safidy azo dia tombontsoa lehibe lehibe.
Customer support: ny fakantsary fiakanjoana, mety ho tena mahaliana sy manaitra nefa mbola marefo. Ny hadisoan'ny pasts dia ahitsy amin'ny vaovao novolarina, amin'ny fotoana iray na hafa mety hangataka anao hiteny amin'ny fanohanana ara-teknika momba ny olana mety hatrehanao amin'ny fitaovanao. Amin'ny tranga toa an'io, tsara dia manana olona avy amin'ny orinasa azonao iresahana ianao ary hamaly anao haingana. Koa satria mazava ho azy fa fitaovana fakana aina sy fampahalalana hita maso ny fakan-tsary, dia maniry ny valin'ireo fanontaniana ireo haingana. Zava-dehibe tokoa izany amin'ny fisafidianana hatramin'ny tokony hitranga ny fahasarotana ara-teknika, ilaina ny manampahaizana iray vonona hiatrika mba hiatrehana azy ireo amin'ny fomba voafaritra tsara.
Misambotra mialoha ny hetsika: indraindray mety hisy hetsika iray haingana tsy ela taorian'ny nijanonan'ny fakantsary, nisy hetsika tena lehibe natao. Mety hahitana tranga toy ny fanilihana mpiandraikitra iray ao amin'ny tratrany na angamba nokapohin'izy ireo tamin'ny tarehy alohan'ny nanaovana azy. Ekena eran-tany fa raha ny hery no takiana, dia tsy maintsy ampiasaina io. Indraindray mila misambotra ny ampahany amin'ny hetsika iray tsy ampoizinao ianao Mitranga izy ireo alohan'ny ahafahanao mamely ny bokotra firaketana, ireo no antony mahatonga ny bokotra mialoha ny rakitra.
Raha mijery ireo lafin-javatra lehibe rehetra ireo ary mampatsiahy azy dia misafidy mora kokoa ny misafidy ny fakan-tsary tsara indrindra ho an'ny asa.
Misafidiana ny fakan-tsary mety amin'ny vatana no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin